၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွင်းမှာလျှပ်စစ်ယာဉ် ပေါင်း ၁.၅၂ မီလီယမ်ကျော်အထိရောင်းချနိုင်ခဲ့တဲ့ Toyota! – AutoMyanmar
Toyota အနေနဲ့ ၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွင်းမှာ လျှပ်စစ်ယာဉ်ပေါင်း ၁.၅၂ မီလီယမ်ကျော်အထိရောင်းချနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတော့ ဖေဖော်ဝါရီ ၂ ရက်နေ့က ကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၆ က ရောင်းအားထက် ၈ ရာခိုင်နှုန်းအထိမြင့်တက်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရောင်းအားရလဒ်ကိုတော့ Toyota အနေနဲ့ ၂၀၂၀ မှရရှိလိမ့်မယ်လို့ ခန့်မှန်းထားတာဖြစ်ပြီး ၂၀၁၇ ကတည်းရရှိနေတာကြောင့် Toyota အတွက်ကတော့ အလားအလာကောင်းဖြစ်သလို Toyota ရဲ့ Environmental Challenge 2050 ထဲက တစ်ခုဖြစ်တဲ့ “ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ဓာတ်ငွေ့ ၉၀ရာခိုင်နှုန်းအထိလျှော့ချမှု” ကိုလည်းအထောက်အကူပြုစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
Toyota ဟာလျှပ်စစ်ကားတွေကိုတော့ ၁၉၉၇ ခုနှစ်ကတည်းကစတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့တာပါ။ ၁၉၉၇ ခုနှစ်တုန်းကဆိုရင် Toyota ရဲ့လျှပ်စစ်ကားတွေဟာဆိုရင် တစ်ကမ္ဘာပေါင်းမှာ အစီး ၅၀၀ ပဲရောင်းထွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အစီး ၅၀၀ ရောင်းအားကနေ နှစ် ၂၀ အကြာ ၂၀၁၇ မှာတော့ ၁.၅၂ မီလီယမ်ကျော်အထိတောင်ရောင်းချနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
“In just over 20 years, we have seen electrified new vehicle sales increase from under 500 sales to more than 1.5 million sales,” said Shigeki Terashi, executive vice president, Toyota Motor Corporation. “This isatestament from our customers to the quality, durability and reliability of our electrified powertrains, and, thanks to them, has led us to establishasolid and sustainable foundation for mass producingamore diverse portfolio of electrified vehicles across our range moving forward.”
အပေါ်မှာဖော်ပြထားတာကတော့ ဒီရလဒ်အတွက် Shigeki Terashi ရဲ့ကျေးဇူးတင်စကားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ Shigeki Terashi ဟာတော့ Toyota Motor Corporation ရဲ့ executive vice president တစ်ဉီးပါ။
၁၉၉၇ ခုနှစ်မှာထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ Toyota လျှပ်စစ်ကားလေးကတော့ Prius first generation ပါ။ ၂၀၀၃ ခုနှစ်မှာတော့ တိုးမြှင့်မှုတွေပြုလုပ်ပြီး second generation ကိုထုတ်လုပ်ပြီး ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှာတော့ third generation ကိုထုတ်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်ရောက်ရှိလာတော့ Fuel Cell ပါဝင်တဲ့ လျှပ်စစ်ယာဉ်ဖြစ်တဲ့ Mirai ကိုထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၆ ရောက်တော့ Prius ရဲ့ fourth generation ကိုပြန်လည်ထုတ်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၇ ရောက်ရှိလာတော့ Plug-in Hybrid လျှပ်စစ်ယာဉ်တွေကိုပါထုတ်လုပ်လာနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ (ဒါကတော့ Highlight ဖြစ်တာကြောင့် ကြားထဲက Prius model အချို့ကျော်ထားပါတယ်) Toyota အနေနဲ့ အခု ၂၀၁၈ ကစတင်ပြီး နည်းပညာပိုင်းကိုဖွံဖြိုးအောင်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမှာ ဖြစ်ပြီး ၂၀၂၀ ရောက်ရှိရင်တော့ ဘက်ထရီပါဝင်တဲ့ လျှပ်စစ်ယာဉ်တွေကို ထုတ်လုပ်သွားတော့မှာပါ။
Toyota ဟာ လျှပ်စစ်ကားတွေကို အင်တိုက်အားတိုက်ထုတ်လုပ်ဖို့ အစီအစဉ်ဆွဲနေတာကတော့ သူတို့ရဲ့ “Environmental Challenge 2050” ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်မှုကို ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိလျှော့ချဖို့ အခုကတည်းကအင်တိုက်အားတိုက်လုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ပဲဆိုရမှာပါ။ ရည်ရွယ်ချက်ကောင်းမွန်တဲ့ Toyota ဟာဘယ်လိုရလဒ်ကောင်းတွေ ထပ်မံသယ်ဆောင်လာဉီးမလဲဆိုတာကတော့ စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲ။
Toyota sells 1.52 million electrified vehicles in 2017, three years ahead of 2020 target | CORPORATE | TOYOTA Global Newsroom https://t.co/hdIViArqbZ pic.twitter.com/MKvc9HPldn
— David Brunt (@dave_brunt) February 2, 2018